मलको महाभारतः बच्चा बोकेर ५ घण्टा लाइन लाग्दा जम्मा २० किलो ! - Jhapa Online
मलको महाभारतः बच्चा बोकेर ५ घण्टा लाइन लाग्दा जम्मा २० किलो !
नीलकण्ठ, २२ भदौ । नीलकण्ठ नगरपालिका–८ की बिन्दा श्रेष्ठ काखमा दुधे छोरो बोकेर बिहानै सदरमुकाम आइन् । काम थियो– रासायनिक मल किन्ने । सदरमुकामको नीलकण्ठ सहकारीबाट बिहीबार मल वितरण गर्ने सूचना पाएकी बिन्दा छोरालाई लिएर बिहान ७ बजेनै यहाँ आएकी हुन् ।
यसअघि २ पटक मल लिन सदरमुका आउँदा रित्तै फर्केकी उनी खानासमेत नखाई बिहानै लाइन बसिन् । काखमा छोरो च्यापेरै घाममा ५ घण्टा लाइनमा बसेपछि बल्लतल्ल १२ बजेतिर उनले २० किलो मल पाइन् । मल किनेपछि लामो सास फेर्दै भनिन्, ‘पाखोबारीमा कोदो रोपेको छु, मल नहालौं, उब्जनी कम हुन्छ, हालौं किन्न यत्रो सास्ती छ ।’
टन्टलापुर घाममा बिन्दासँगै सदरमुकाम आसापासका ठूलो संख्याका कृषक २० किलो मल किन्न घण्टौं लाइनमा बसेका थिए । खाद्य तथा तरकारी बालीमा समयमै मल हाल्न नपाएका किसान भनेको समयमा र भनेजति मल नपाउँदा आक्रोशित देखिन्थ्ये ।
नीलकण्ठ नगरपालिका–१२ की केशवकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘दुई साताअघि नै धान र कोदोमा मल हाल्ने बेला भइसकेको थियो । तीन पटक किन्न भनेर आएँ तर खाली हात फर्किएँ । आफूलाई १ बोरा चाहिन्छ, बल्लतल्ल लाइन बसेर २० किलो मात्रै पाइन्छ । कति ठाउँमा हाल्नु, चाहिएको बेला दिन नसके बाली सप्रिन्न, किसानको यो दुःख कसले हेरेदिने ?’ आजकोअन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
न्यूनतम ज्याला नपाएको भन्दै आन्दोलन सुरू, पूर्वका चिया बगान तथा उद्योगहरू बन्द
अर्जुनधारा नगरपालिका र पूर्वाध डेरी बीच ९ बुँदे सम्झौता
गौरादहमा जैविक मल उत्पादन तालीम
कृषि • राजनीति
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकार क्रियाशील